Ungashinga here kugadzira gomba muAirTags yako kuti uipfeke yakaturika? iFixit, hongu | Ndinobva mac
Jordi Gimenez | 03/05/2021 22:00 | Noticias
Kutengeswa kweApple maAirTag kwave pasina mubvunzo kubudirira kukuru. Mukuwedzera kune zvishandiso ivo pachavo iyo Cupertino kambani irikugadzira mari nekuda kwemidziyo yayo zvinoshanda zvine musoro kutakura aya maAirTag chero kupi.
Ichi chinhu chinosiyanisa chigadzirwa cheApple kubva kune zvimwe zvigadzirwa zvakafanana uye ndechekuti gomba harina kuwedzerwa muchigadzirwa pacharo kuti rirembedze, zvinodikanwa kutenga chinongedzo kana usina "homwe" yekuitakura. Asi iFixit yaida kuita bvunzo yekuboora imwe yeaya maAirTag nemhepo yakanaka kwazvo uye zvinogoneka pasina kukuvadza.
Neizvi isu tinoreva kuti tinokurudzira kubaya Apple AirTags? Kwete, asi zvinoshamisa kuti neinopfuura inopfuura 1/4 inch ivo vakwanisa kuboora aya maAirTag uye zvine musoro vanoramba vachishanda pasina dambudziko. Kunze kweizvozvo kurasikirwa nekushomeka kwemvura uye guruva zvinopihwa nemidziyo iyi.
Vamwe vashandisi vanonetseka kuti sei Apple isingade kuti iwe utakure yako AirTag zvakananga pasina kutenga chinongedzo, uye ndizvo chaizvo kiyi iripo, tengesa zvishongedzo zvemidziyo yako uye uwane mari yakawanda.
Isu tatoona kudonhedzwa kwemidziyo iyi mazuva mashoma apfuura akaitwa neiyo iFixit, mukati meiyi tinowana mukana wekuboora iyo AirTag nechidiki kuitakura ichirembera kunyangwe isu hatikurudzire iyi sarudzo zvachose. Kune rimwe divi, zviri pachena kuti vazhinji vashandisi vari kusarudza kutevedzera kana akafanana mackeyin kutora zvigadzirwa izvi chero kupi, chimwe chinhu icho Apple zvakasikwa zvakare chine.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Ungashinga here kugadzira gomba muAirTags yako kuti uipfeke yakaturika? iFixit, hongu
Nguva yekutora yaJune 9-16 paMac